Asambodo onye isi ala Almasi - CAPSI
Almasi pụtara “diamond” na Kiswahili. Ọmụmụ ihe a bụ maka ndị mmadụ n'otu n'otu nọ n'ọkwá dị elu na-achọ ịzụlite ọkachamara ma wusie ike ọmụma ha na ijikwa na idu ndú na ngalaba ọrụ ebere karịsịa na mpaghara anaghị akwụ ụgwọ n'ozuzu, yana maka ndị na-ahụ maka ọrụ mmekọrịta ọha na eze na mpaghara Africa.
Ebumnobi nke obere nkuzi a bụ ịzụlite ngwa dị elu na nke bara uru nke enyemaka enyemaka na itinye ego na ọha mmadụ. Ọ na-elekwasị anya na echiche dị oke egwu na nyocha nke isiokwu na ụkpụrụ ndị dị ka ndu, njikwa, atụmatụ, nkà na ụzụ, ịkwado ego na ijikwa akụrụngwa na amụma ọha, nkwado na nha.
Ihe omume a nwere usoro mmụta mmanye ise na nkuzi atọ nhọpụta.
C1. Ọmụma aka Africa na Strategy
C2. Nduzi nke ndị ọrụ enyemaka na ndị otu anaghị akwụ ụgwọ
C3. Ịnweta ego na ijikwa akụrụngwa
C4. Amụma Ọha, Nkwado na nha
C5. Ọrụ mmekọrịta ọha na eze ụlọọrụ
E1. Na-enye ndụmọdụ gbasara akụ nkeonwe
E2. Ụlọ ọrụ Social Investment
E3. Onyinye Ogbe/Ofe Enyemaka
E4. Ntọala obodo
E5. Philanthropy (Onyinye) na ebumnuche mmepe na-adịgide adịgide
E6. Ọrụ nke Okpukpe na Nkwenye
E7. Amụma Ọha, Iwu na Iwu
40 000.00 ZAR